xuquuqdaada | Refugee Center Online | Refugee Center Online
Sida loo noqon xirriirka dugsiga a - shaqooyin wanaagsan bixinta qaxootiga & waddanka u soo guurey
Shaqooyin loogu talogalay qaxootiga iyo soo galootiga
Waxaad xaq u leedahay in ay ammaan ee dalka Mareykanka. Baro oo ku saabsan xuquuqda aad u leedahay ka helay Dawladda Maraykanka iyo sida ay u ilaaliso naftaada la xuquuqdaada sharci. Akhri wax dheeraad ah
Maraykanka keena Ehelkiinna (Ururinta qoyska)
Dowladda Maraykanka ayaa waxay leedahay barnaamij u ogolaanaya dadka qaxootiga ah si aad u codsato in ay ninkaaga / xaaskaaga iyo carruur si live iyaga la soo galo Mareykanka yeedhay keenida qoyska. Waa inaad dalbataa barnaamijkan laba sano oo ku nool qaxooti ahaan dalka Maraykanka ama laba sano ka hesho magangelyo dalka Maraykanka gudahood. Akhri wax dheeraad ah
xitaa haddii aadan tahay muwaadin, waxaad leedahay xuquuq sharci ah oo dalka Mareykanka ah si ay adiga iyo qoyskaaga u ilaaliso. Akhri wax dheeraad ah
kaadhka cagaaran (deganaansho joogto ah)
Ka dib markii ay ku nool Maraykanka muddo hal sano ah, waa in aad codsato in uu noqdo dagane joogto ah ama si aad u hesho kaadhka cagaaran. kaadhka cagaaran Your cadeyn u tahay in laguu oggol yahay in ay ku noolaadaan iyo shaqada ee dalka Maraykanka. Akhri wax dheeraad ah
Qaxooti ahaan, waxaad ku safri kartaa meel kasta oo Maraykanka. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u baahan tahay in ay u safraan meel ka baxsan Maraykanka, aad leedahay si aad u buuxiso waraaqaha safarka khaaska ah iyo foomamka. Akhri wax dheeraad ah
Tirada qaxootiga loo ogol yahay in Maraykanka ee 2019
ogaysiin waxaa loo sameeyey in tirada qaxootiga loo ogol yahay in ay yimaadaan Maraykanka ee 2019 waa 30,000. Halkan jira saddex waxyaalood oo waa in aad sheegtaa haddii aad tahay qaxooti in mar hore halkan Akhri wax dheeraad ah
Ururinta qoyska: Warbixin ku saabsan sida aad u codsan kartaa xubnaha qoyskaaga inay u yimaadaan Mareykanka
socod dheer xorriyadda: xerada qaxootiga ee Dhadhaab in Minnesotasocod dheer xorriyadda: Laga soo bilaabo xerada qaxootiga ee Dhadhaab in Minnesota. qaxootiga A ka tarjumaysaa sodcaalkiisii ​​buu ka Dadaab, xerada qaxootiga ee ugu weyn caalamka ee ku yaalla Kenya